झापामा चन्दका १७ कार्यकर्ता पक्राउ - Kendrabindu Nepal Online News
झापामा चन्दका १७ कार्यकर्ता पक्राउ
२८ श्रावण २०७६, मंगलवार ०६:१८
झापामा प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द समूहका १७ कार्यकर्ता पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट सो समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सो समूहले भद्रपुर, बिर्तामोड, अर्जुनधारा, दमक लगायत विभिन्न स्थानमा एनसेलका टावरमा आगजनी तथा विष्फोट गराएको भन्दै तिनका कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
सोमबार बिर्तामोड नगरपालिकाको संयुक्त वडा कार्यालय (७, ८ र ९) मा समेत बम विष्फोट भएको छ । विष्फोटको जिम्मा कसैले नलिए पनि चन्द समूहले नै विष्फोट गराएको हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले बताउनुभयो । मैनालीका अनुसार वडा कार्यालयमा बम विष्फोट गराउने समूहको खोजी भइरहेको छ । प्रेसर कुकर बम विष्फोटका कारण वडाको सम्पूर्ण काम पूर्णरूपमा प्रभावित भएको छ ।
चन्द समूहका बर्दिया जिल्ला सेक्रेटरी पक्राउ
यता बर्दियाको राजापुरमा प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द समूहका बर्दिया सेक्रेटरी गणेश अर्याललाई पक्राउ गरेको छ । अर्याललाई सोमबार सदरमुकाम गुलरियाबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक राजेशनाथ बाँस्तोलाले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा घटेका विभिन्न घटनामा उनको संलग्नता रहेकाले अनुसन्धान अगाडि बढाइएको बाँस्तोलाले बताउनुभयो ।
यस्तै प्रदेश नं. ५ का प्रहरी प्रमुख सुरेशविक्रम शाहले नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई चन्दा नदिन उद्योगी–व्यवसायीसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
उक्त समूहले चन्दा आतङ्क शुरु गरेको व्यवसायीको गुनासोपछि उहाँले राज्यको भरोसा गर्न र चन्दा नदिन आग्रह गर्नु भएको हो । प्रहरी नायब महानिरीक्षक शाहले भन्नुभयो, “हामी किन चन्दा दिन्छौँ, राज्यको भरोसा छैन ? राज्यभन्दा ऊ ठूलो भयो ? अमुक दललाई सहजै चन्दा दिनुहुन्छ, सेवा र मुनाफा आर्जन गर्ने तपाईं (व्यवसायी) ले चन्दा दिएको पैसा कहाँबाट उठाउनु हुन्छ, यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, तपाईं हामी सचेत हुन जरुरी छ ।”
उद्योग व्यवसायको सुरक्षा गर्न नेपाल प्रहरी तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मर्यादामा रहेर पेशा सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीले परासीमा आयोजना गरेको औद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धी छलफलमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक शाहले भन्नुभयो, “उद्योग व्यवसाय भनेको राज्यको मेरुदण्ड हो, तपाईंहरु सबल सक्षम रहे मात्र राष्ट्रको उन्नति हुन्छ, हामी सधैँ सुरक्षा दिन तत्पर छौँ ।”
१७ कार्यकर्ता, झापामा चन्दका
Prevफास्ट ट्र्याकमा दबाब झेल्दै सेना
मिडिया विधेयकः ओली र देउवाबीच सहमतिको प्रयासNext
तस्विरमा विश्वका गगनचुम्बी १० भवनहरू
मदन भण्डारी कलेजबाट घ्याम्पेडाँडा पिकनिक गएकाे बस दुर्घटना २४ घाइते २ काे अवस्था गम्भीर
आजदेखि नारायणगढ-मुग्लिन सडक दिउँसो बन्द हुने
एनसेलद्वारा दुई विजयी ग्राहकलाई नगद पुरस्कार